के हुँदैछ कश्मीरमा? अमरनाथ यात्रामा रोक | Matrisandesh
के हुँदैछ कश्मीरमा? अमरनाथ यात्रामा रोक
नयाँ दिल्ली (एजेन्सी) । भारत प्रशासित कश्मीरमा तनाव बढेको छ । शुक्रबार कश्मीर सरकारको गृह विभागले एक एडभाइजरी जारी गर्दै अमरनाथ यात्रामा रोक लगाएको छ । राज्यमा रहेका सबै पर्यटकलाई तुरुन्त कश्मीर छाड्न भनिएको छ ।
भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार अमरनाथ तिर्थयात्रा रोक्ने र पर्यटकलाई राज्य छाड्न गृह विभागले सूचना जारी गरेपछि त्यहाँको अवस्था नाजुक बनेको छ ।
शुक्रबार सरकारको यस्तो अलर्टपछि जम्मू कश्मीरमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरुको सामुहिक आपतकालीन बैठक भएको जनाएको छ । सो बैठकमा के निर्णय भयो भन्ने विषयमा भने केही खुलाइएको छैन ।
सरकारले भने अमरनाथ यात्रा रुटमा खोजतलाशका क्रममा स्पाइनर राइफल फेला परेको र तिर्थयात्रीमाथि आतंकवादी आक्रमण हुने संकेत पाएको भन्दै यात्रा रोक्न भनिएको जनाएको छ । सरकारले सेनाले ब्यापक शर्च अभियान चलाउनेसमेत जनाएको छ ।
कश्मीरमा अतिरिक्त सैन्य बल परिचालन गरिएपछि यसअघि नै कश्मीरको माहोल तनावपूर्ण र डर लाग्दो बनिरहेको थियो । शुक्रबारको सरकारी घोषणापछि अवस्था थप नाजुक बनेको जनाइएको छ ।
अर्धसैनिक बलको अतिरिक्त १०० कम्पनी तैनाथ गर्ने केन्द्री गृह मन्त्रालयको खादेशपछि उपत्यकामा डर र बेचैनको माहोल बनेको छ । गृह मन्त्रालयको खबर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ ।
गृह मन्त्रालयको पहिलो आदेश २५ जुलाईमा भाइरल बनेको थियो । जसमा अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनाथबारे उल्लेख थियो । अर्को दिन पनि गृह मन्त्रालयको दोस्रो आदेश पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो । जसमा रेलवेका सबै कर्मचारीहरुलाई ४ महिनाको राशन र एक हप्ताका लागि पिउने पानी जम्मा गर्न भनिएको थियो । यसै ओदशमा सबै गाडीहरुमा तेल भर्न र ग्यारेजमा राख्न भनिएको थियो ।
गृह मन्त्रालयको एक अर्को आदेश पनि भाइरल भयो जसमा सबै मस्जिदको सूचना संकलन गर्ने भनिएको थियो। तर प्रहरीले तुरुन्त यसको खण्डन गर्यो र यसलाई नियमित पक्रिया भन्यो ।
एकपछि अर्को भाइरल बनेका यी सूचनाका कारण आम कश्मीरिहरुमा डरको माहोल बनेको छ ।
तर जम्मू कश्मीरका राज्यपाल सत्यपाल मलिकले मंगलबार यी हल्लाहरुको खण्डन गर्दै कश्मीरमा सबै ठिक रहेको बताए ।
उनले श्रीनगरमा संववाददाताहरुसँग भने, सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएक सबै आदेश सरकार आदेश होइनन् । कश्मीरमा सबै ठिक छ ।’
जब यी आदेश भाइरल भए, श्रीनगरको बेमिना क्षेत्रमा बस्ने गुलाम हसन भट्टको रातीको निन्द्रा गायब भयो । श्रीनगरमा गुलाम हसनको दाउराको पसल छ । उनी भन्छन्, ‘जबदेखि हामीले कश्मीरमा सुरक्षा बल तैनाथको कुरा सुन्यौं, हामीलाई डर लागेको छ ।’
उनी भन्छन्, ‘जसले पनि यहाँ सुरक्षा बल तैनाथ हुने कुरा सुनेको छ, उनीहरुले असहज महसुस गरेका छन्, जहाँसम्म कारोबारको कुरा छ, त्यसमा पनि प्रभाव परेको छ । आम मानिसहरु यो कुराको अनुमान गरिरहेका छन् की आगामी दिनमा के हुनेछ । सुरक्षा बलको तैनाथीपछि हामीले सुनेका छौं केही कानुनलाई रद्द गरिँदैछ रे, हामीलाई थाहा छैन अतिरिक्त सुरक्षा बल किन ल्याइँदै छ ।’
उनका अनुसार रेलवे प्रशासनले तीन महिनाको खाद्यन्न जम्मा गर्ने आदेश जारी गरेको छ । यसपछि कश्मीरमा मस्जिदहरुको बारेमा खबर आयो । यो अवस्थामा मानिसहरु निकै तनावमा छन्। आगामी दिनहरुमा मेरो घरमा बिहे छ, तर हामीलाई समस्या भएको छ, बिहेको तयारी गरौंकी रोकौं । यस्तो अवस्थाका कारण काठको कामको अर्डर फिर्ता भएको छ ।’
हसनका छोरा हमाद भट्ट इन्जिनियरिंगको पढाई गरिरहेका छन् । उनी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा पढाई बिग्रिरहेको छ।’
उनले भने, ‘गएका केही दिनहरुमा कश्मीरमा जे पनि भएको छ, त्यसले प्रत्येक्षरुपमा हाम्रो पढाईमा बाधा उत्पन्न भएको छ । हाम्रा लागि यो महत्वपूर्ण कुरा हो । हाम्रो सेमेस्टर कहिले पूरा हुन्छ । यदि अवस्था यस्तै रह्यो भने परीक्षा पनि सर्न सक्छ । विद्यार्थीहरु मानसिक समस्या भोगिरहेका छन् । कलेजमा पनि वर्तमान अवस्थाबारे कुरा हुन्छ ।’
हमाद भन्छन्, ‘जबदेखि जम्मू कश्मीरको गठबन्धन सरकार ढलेको छ, केन्द्रको बीजेपी सरकार आर्टिक ३५ ए र आर्टिक ३७० रद्द गर्न लागिरहेको छ ।’
भट्ट परिवारका नातेदार हुमैरा फिरदौसु पनि डराएकी छन् । उनलाई आगामी दिनमा कश्मीरको अवस्था खराब हुने अनुमान छ । उनी भन्छिन्, ‘हामीले सुनेका छौंकी कश्मीरको अवस्था खराब हुँदैछ । हामीलाई यसको आभास पनि भएको छ । हाम्रो कारोबारमा पनि प्रभाव पर्नेछ । हामीले यो पनि सुनेका छौंकी ईदपछि अवस्था जे पनि हुन सक्छ । मानिसहरु भन्छन्, कश्मीरमा कुनै कानुन रद्द हुँदैछ ।’
फिरदौस भन्छिन्, ‘हामीले ठूलो संख्यामा सुरक्षा बल तैनाथ हुने कुरा पनि सुनेका छौं । पहिला हामीले सोच्यौं यो हल्ला होला । तर, जब सुरक्षाबलका टुकुडीहरु आए हामीले सबै कुरा बुझ्यौं र केही त हुन लागेको अनुमान गरेका छौं ।’
गएको वर्षै बीजेपीले समर्थन फिर्ता लिएपछि बीजेपी–पीडीपीको गठबन्धन सरकार ढलेको थियो । त्यो बेलादेखि राज्यमा राष्ट्रिपति शासन लागु छ । हालसम्म विधानसभा चुनाव भएको छैन ।
गएका तीन वर्षहरुमा कैयौं पृथकतावादी नेताहरु र कार्यकर्ताहरुलाई सुरक्षा एजेन्सीहरुले चरमपन्थलाई आर्थिक सहयोग गरेको र अन्य आरोपमा गिरफ्तार गरिरहेका छन् ।
गएका ४ वर्षहरुमा सुरक्षाकर्मीले नागरिकको हत्या गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । सुरक्षा बलसँगको भिडन्तमा सयौं चरमपन्थी मारिएका छन् ।
केही पत्रकारहरुले गृह मन्त्रालयको आदेश आउनुभन्दा पहिला राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहाकार अजित डोभालले राज्यको भ्रमण गरेको बताएका छन् ।
भाइरल भइरहेका सरकारका आदेशका कारण आम मानिसहरुमात्र तनावमा छैनन्, यहाँका राजनीतिक दलहरुमा पनि हलचल आएको छ । पूर्व मुख्यमन्त्री तथा पीडीपीकी नेतृ महबूबा मुफ्तीले आर्टिक ३५ ए रद्दको विषयमा नयाँ दिल्लीलाई चेतावनी दिएकी छन् । गएको आइतबार उनले पार्टी स्थापना दिवसका अवसरमा भनिन्, ‘आर्टिकल ३५ एलाई छुने हात खरानी बन्नेछन् । हातमात्र होइन उसको पूरा शीर भस्म हुनेछ ।’
कृषि उत्पादन समृद्धिको आधार : मन्त्री थापा
कुहिरोका कारण त्रिभुवन विमानस्थलबाट हुने सबै उडान अवरुद्द
इरानी सर्वोच्च नेतालाई शब्द चयनबारे ट्रम्पको चेतावनी
युएई बस दुर्घटनामा तीन नेपाली महिलाको मृत्यु (मृतक र घाइतेको नामसहित)
व्यवस्थापनमा चुक्दा आत्माहत्याको बाटो
दैनिक २१ घन्टा सञ्चालनमा आएको विमानस्थल १० घन्टा बन्द
पोखरामा हुने १३ औँ सागमा १५९ पदकका लागि प्रतिष्पर्धा हुँदै
विजया दशमीको टिका आज,बिहान ९:५१ मिनेटको साइत
दुई नम्बर प्रदेश चुनाव सारेकोमा बैद्य माओवादीको आपत्ति